11 ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာ ၁၁ ခု Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 7, 2014 သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 6, 2020 Douglas Karr
သင်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုယူပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလုပ်နိုင်သည့်အခါသင်ဝဗ်ပေါ်၌သင်တွေ့ရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာအချို့သည်ဖြစ်ပျက်သည်။ Copyblogger ကအဲဒီလိုလုပ်လိုက်တယ် ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုရေးသားခြင်းတွင်ဤအချက်အလက်။ အကြံဥာဏ်တိုင်း၏ရှုထောင့်တိုင်းသည်စာဖတ်သူများကိုရယူရန်နှင့်သိမ်းထားရန်အတွက် post ကိုသန့်စင်ရန်နှင့်အရောင်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ မတိုင်မီ & ပြီးနောက်အချို့သော့ချက်ရှိပါတယ် ...
ရှေ့မှာ - သင့်ဘလော့ဂ်ကိုရေးပါ ကောင်းစွာ - optimized ပလက်ဖောင်း ၎င်းသည်ရသဗေဒနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီးမျှဝေခြင်းကိုအားပေးသည်။ စာဖတ်သူများအနေဖြင့် ထပ်မံ၍ ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် (subscriptions, downloads, member, etc) ကိုခေါ်ဆိုသည်။
ပြီးနောက် - စာဖတ်သူများပိုမိုရရှိရန်နှင့်သင်၏ email ည့်သည်များပြန်လာနိုင်ရန်သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်တွင်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်သင်၏လူမှုမီဒီယာကွန်ယက်များတစ်လျှောက်ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုမြှင့်တင်ပါ။
ပါဝင်မှု (၁၁) ခုစီမှ Copyblogger ၏ဆောင်းပါးများကိုသင်ဖတ်လိုပါကမည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်ကိုဖော်ပြပါ။
တစ် ဦး ဆြုံး သံလိုက်ခေါင်းစဉ်.
ဖန်တီး လက်ရာမြောက်သော subheads.
seductive ပြောပြပါ အကွောငျးအရာ.
အာရုံစူးစိုက်ပါ ပြည်တွင်းရေး cliffhangers.
Tags: စစ်မှန်ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကျည်ဆံအချက်များကော်ဖီခေါင်းစဉ်ဘလော့ဂ်ပို့စ်ရေးနည်းပုံကိုအသုံးပြုခြင်းစာရင်းပစ္စည်းများစာရင်းဖြားယောင်းမိတ္တူpost ကိုခေါင်းစဉ်ဇာတ်လမ်းအရေးအသားခေါင်းစဉ်ငယ်များ
ဇန်နဝါရီလ7ရက် 2014 ခုနှစ် ညနေ 10 နာရီ 57 မိနစ်
ပို့စ်အောက်ခြေမှာ အကျဉ်းချုပ်ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Infographic က နည်းနည်းဖတ်ရခက်တယ်။